Mampiseho ny angano mahazatra indrindra momba ny SEO ny Semalt
Na dia eo aza ny porofo fa mitombo ny maha-zava-dehibe ny SEO dia mandresy lahatra,Misy tompona tranokala sasany dia tsy manakana ny fampiasana ny SEO amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana. Na izany aza, ny fikarohana isan-karazany dia milaza fa zavatra roa manan-danja ny fandraharahanaTokony hanana fisiana organika sy fifamoivoizana mitsidika.
Ny manam-pahaizana lehiben'ny Semalt Digital Services, Artem Abgarian dia maneho ireo anganongan-javatra iraisana indrindra mifandraika amin'ny SEO - dry cleaner equipment appraisals.
Mivoatra haingana ny indostria, vokatry ny fanavaozana ny algorithm matetika.Ny ankamaroan'ny fanavaozana ho an'ny algorithm dia mitranga isan'andro. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ny fanovana dia tsy misy fiantraikany amin'ny fampisehoana tranonkala iray tahaka azy ireoNy ankamaroan'izy ireo dia tsy misy fiantraikany hita maso.
2. Teknôlika sarotra
Ny lafiny sasany amin'ny SEO dia teknika loatra izay misy fiantraikany indraindrayfanatsarana ary ny tranokalan'ny fanorenana. Na izany aza, ny ankamaroan'ny asa SEO dia mifantoka amin'ny hetsika ara-barotra henjana toy ny fitadiavana teny fanalahidy, famoronanany votoaty manan-danja, ny fanaraha-mason'ny fanaraha-maso ary ny fanombanana ny fifamoivoizana
Ny olona dia mino fa ny fampiharana ny SEO dia tsy misy ao amin'nytsena noho ny fivoarana tsy tapaka natao tamin'ireo algorithm sy fanovana hafa. Ny hevitra dia tsy marina toy ny habetsahan'ny fifamoivoizanaavy amin'ny SEO..Ny famakiana ny famoahana ny SEO tahaka ny Search Engine Journal dia manampy ny tompona fandraharahana ary hampahafantatra azy ireoizay mbola manan-danja.
4. Fomba fijery maharitra
Ilaina ny fotoana hanamboarana ny fananganana sy fametrahana tranonkala irayeo amin'ny aterineto izay tsy azo lavina. SEO, na izany aza, dia tsy miova, ary hitondra vokatra foana raha mbola feno ny tranonkalaoptimisé.
Noho ny fahavitsian'ny SEO, mino ny olona fa tsy azo antoka.Tsy misy fanaraha-maso mivantana ny fisoratana na ny fifamoivoizana toy ny PCC. Na izany aza, amin'ny fanatsarana ny tranonkala ho an'ny tetik'asa SEO,Misy fepetra kely farafahakeliny ny fahitana olana.
Ny fanatrarana ny vokatra tsara indrindra dia mitaky vola amin'ny fotoana sy ny fotoanaary loharano hafa. SEO tsy maimaim-poana fa sarotra kokoa noho ny fanodinkodinana dokam-barotra hafa toy ny PPC, na ny fampividy fifamoivoizanafomba hafa.
7. Fiovana tamin'ny tranonkala
Marina tokoa fa ny SEO dia mitaky orinasa hanao fanovana vitsivitsyao amin'ny tranonkalany. Indraindray dia mety haka fepetra vitsy izy, fa amin'ny hafa kosa, mamerina manangana manontolo ny vohikala ho fenomety. Ny iray amin'ireo fanolorana soso-kevitra dia fanalahidy ho an'ny tanjona SEO.
Ankehitriny, ny orinasa rehetra dia miatrika ny lanjan'ny fikarohanafifamoivoizana. Ny mpanjifa dia mampiasa fitaovana fitadiavana hahitana vokatra, serivisy, mpivarotra ary fampahalalana. Tsy miraharaha ny filàna ny orinasaAo amin'ny valin'ny fikarohana dia mety hitarika fifamoivoizana ho an'ny mpifaninana, mba hahatonga ny orinasa amin'ny fomba ratsy.